Zvepakati latheman Kudzidziswa
Musi waGunyana 29, 2020, zvinoenderana nechikoro-bhizinesi kudzidziswa chibvumirano uye chirongwa chekudzidzisa, mazana matatu nevashandi vekambani yedu vakapinda mukirasi yepakati yekudzidzisa ye latheman yakarongedzwa neRudong County Human Resources uye Social Security Bureau uye Rudong County Huayi Vocational T .. .
Rudong County Youth Chamber of Commerce Yechipiri Mutungamiri Hofisi (Yakawedzerwa) Musangano wakaitirwa mukambani medu
Musi waNyamavhuvhu 7, 2020, Rudong County Youth Chamber of Commerce Yechipiri Mutungamiri Hofisi (Yakawedzerwa) Musangano wakaitirwa mukamuri yemusangano padhoro repiri rekambani yedu. Paive nevamiriri vanopfuura makumi matatu vaipinda musangano uyu, kubva kumatunhu ese eRudong County. Komuredhi Ma Dongbo, depu ...
Iyo 2020 yekudzidza yekuchinjana seminari yeElectroplating Indasitiri Bazi reRudong County Environmental Protection Federation yakaitirwa muRUDONG CHAIN ​​MABASA.
ne admin pane 20-07-26
Musi waChikunguru 26, 2020, iyo 2020 yekudzidzira yekuchinjana seminari yeElectroplating Indasitiri Bazi reRudong County Environmental Protection Federation yakaitirwa mukamuri yemusangano padhoro repiri reimba yevaeni yekambani yedu. Nhume dzinopfuura makumi maviri dzakapinda musangano uyu. Musangano usati waitwa, ...
Vachisimudza Chain Machinery Kutakura, G80 chiwanikwa simbi Kutakura Kusimudza chitakuriso Chain, Stainless Simbi Yekutakura Chain YeSewag, Marine Pfupi Batanidza Chain, G80 Nokusimudza Chain Grade 80 chiwanikwa Chain, Chiwanikwa Steel paakasimudza Chain,